“Intaan Qeyb Ka Mid Ah Ciidanka Uganda Ee Ku Sugan Soomaaliya Soo Saari Lahaa, Dhammaantood Ayaan La Soo Baxayaa” Madaxweyne Yoweri Museveni – somalilandtoday.com
“Intaan Qeyb Ka Mid Ah Ciidanka Uganda Ee Ku Sugan Soomaaliya Soo Saari Lahaa, Dhammaantood Ayaan La Soo Baxayaa” Madaxweyne Yoweri Museveni
(SLT-Uganda)-Madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni ayaa sheegay inuu Ciidamadiisa ku sugan Soomaaliya uu ka saarayo, haddii Ururka Midowga Afrika uu isku dayo inuu dhimo ciidamadiisa ka tirsan howlgalka AMISOM.
Museveni ayaa soo bandhigay warar ay isweydaarsadeen isaga iyo golaha ammaanka ee Qaramada Midoobey, taasoo la xidhiidha qorshaha la dejiyay ee lagu dhimayo kumanaanka askari ee ka socda dalalka Afrika ee mudada ka badan 10-ka sano ku sugnaa dalkan.
Waxaa uu ku hanjabay inuu Ciidankiisa la baxayo ee gaadhaya 6,400, haddii la isku dayo in xitaa hal askari oo kamid ah la saaro.
“Golaha Amaanka waxey noo soo jeediyeen inaan dhinno Ciidankeena, waxaanse u sheegay in xitaa hal askari aan la saareynin oo ay wada joogayaan ama dhamaantood ay baxayaan” ayuu yidhi madaxweyne Museveni.
Madaxweynaha Uganda ayaa dhinaca kale sheegay iney diyaar u yihiin iney dalkan isaga baxaan, balse ay ka horeyso helitaanka Ciidamo Soomalai ah oo ku filan amniga guud ee dalkan, kuwaasoo aan xiligan saansaanteeda muuqan.
Yoweri Museveni ayaa noqonaya madaxweynihii 2-aad ee iska diiday inuu saaro Ciidankiisa Amisom, iyadoo hore Madaxweynaha Burundi Pierre Nkurunziza uu sidan oo kale ka hor yimid qorshaha looga saarayo Ciidanka Burundi.
400 oo askari oo u dhashay Burundi ayaa dhowaan laga saaray Soomaaliya, waxaana harsan 600 oo kale oo ka mid ah kunka askari ee la qorsheeyay in dalka laga saaro, si Ciidamada Soomaalida amniga ay hataan.